Abenzi bebhodi ye-foam ye-3mm yePVC kunye nabathengisi Gokai
Ibhodi ye-foam ye-3mm yePVC
Ngokwetekhnoloji yangoku, sinokubonelela ngebhodi ye-foam ye-1-30mm ye-PVC. Phakathi kwazo, ibhodi ye-foam ye-3mm yePVC yinto ethandwa kakhulu. Abathengi basebenzisa ikakhulu ukuprinta nokwenza iibhodi zentengiso.
Ngokwetekhnoloji yangoku, sinokubonelela ngebhodi ye-foam ye-1-30mm ye-PVC. Phakathi kwazo, ibhodi ye-foam ye-3mm yePVC yinto ethandwa kakhulu. Abathengi basebenzisa ikakhulu ukuprinta nokwenza iibhodi zentengiso. I-3mm yahlulwe yabhodi yasimahla ye-PVC kunye nebhodi ye-PVC celuka. Umphezulu webhodi yasimahla urhabaxa, okulungeleyo ukufunxa inki yokuprinta. Umphezulu webhodi ye-celuka ugudile kwaye usetyenziselwa ukukrola.
Ndixelele malunga nokusebenzisa kwakho kwaye siya kuncoma eyona mveliso ifanelekileyo kuwe.
Iimpawu zeBhodi zePv foam
1) Ukukhanya kweentsiba, okungafunekiyo, ukubuyisela umlilo kunye nokucima umlilo
2) Ubungqina bemozulu, ubungqina bendawo ecekethekileyo, kwaye bunokumiliswa, bubunjwe, bupeyintwe kunye nekhusi liprintwe, Ukulungele ukusika, ukucheka, ukuwelda, ukunamathisela, ukwenza i-thermal, ukubethelela, ukubhabha, ukubeka umngxunya.
3) Non-bako, non-ityhefu kunye nemichiza ukumelana
I-4) Ilukhuni, iqinile ngamandla anefuthe eliphezulu
5) Ukungangqubani kunye nobungqina
6) Kulula ukuyicoca nokugcina
Izicelo zeBhodi yePvm Foam
1) .Exhibition kwikhabhinethi, kwithala evenkileni
2) Ibhodi yezaziso kunye nebhodi yemiqondiso
3) .phepha lesaziso lokuprinta, lokukrola, ukusika, ukusika
Ingathunyelwa kuwe nangaliphi na ixesha
Njengoko inkampani yethu ilawula, abathengi abatsha kufuneka bahlawule umrhumo wesampula kunye nentlawulelo-mthwalo.Kodwa ngakumbi, siya kuba nelungiselelo elifanelekileyo.Ngokubhekisele kubathengi abaqhelekileyo, siya kubonelela ngesampulu yasimahla, kodwa kuya kufuneka bahlawule iindleko zothutho
Ukucaciswa kwebhodi ye-foam ye-3mm
0.3g / cm3—0.9g / cm3
Mhlophe, mnyama, bomvu, luhlaza, tyheli, luhlaza njl njl
Eyethu obunye ubukhulu PVC amagwebu ibhodi / ubungakanani bephepha
Ububanzi: 1250mm-2050mm, 2050mm kwi-max.
Ubude: Nawuphi na ubude.
ubungakanani obuqhelekileyo: 1220 * 2440mm, 1560 * 3050mm, 2050 * 3050mm
PHAWULA: singenza olunye ubungakanani ngokwendlela umthengi requirment
intlawulo L / C, T / T, Western Union, Alibaba hlawula, Paypal
MOQ 1mm: 300pcs 2-6mm: 200pcs 7mm ngaphezulu: 100pcs
Ukuhanjiswa Kwiintsuku ezili-15 emva kokuqinisekisa iodolo yakho
iplastikhi okanye ibhokisi ethunyelwa kwelinye ilizwe, amaphepha aliqela kwipallet nganye okanye ngokwemfuno yomthengi. Kananjalo sinokuba necala elinye nefilimu ye-PE.
Egqithileyo UV eziprintiweyo foamboard 2mm
Okulandelayo: Iphepha leplastiki le-4mm